डायलाइसिस सेवामा वीरको चामत्कारिक प्रगति – Health Post Nepal
डायलाइसिस सेवामा वीरको चामत्कारिक प्रगति
२०७५ असोज १८ गते १५:३५
मिर्गौलाको डायलाइसिस सेवामा वीर अस्पतालले संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै हिसाबले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । नेपालमा तीन दशकअघि हेमोडायलाइसिस सेवा भित्र्याएको वीरले पछिल्ला दिनमा उपकरण थप गरी २४ घण्टै सेवा विस्तार गरेपछि दैनिक उल्लेख्य संख्याका मिर्गौलापीडितले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा पाउँदै आएका छन् । ४ बेडबाट हेमोडायलाइसिस सेवा सुरु गरेको वीरले हाल २० बेडमार्फत अहोरात्र सेवा दिँदै आएको छ ।
अस्पतालबाट ०७२ मा २५ जना नयाँ बिरामीले सेवा पाएकोमा ०७३ मा १ सय ६७ र ०७४ मा ३ सय ६७ नयाँ बिरामीले सेवा पाएको तथ्यांक अस्पतालसित छ । इमर्जेन्सी डायलाइसिसलाई हेर्दा ०७२ मा ६० सेसन नयाँ भएका थिए । २४ घण्टै गरेपछि ०७३ मा ४ सय ९८ र ०७४ मा १ हजार ७ सय ६ सेसन भएका छन् । नियमित डायलाइसिस सेवा ०७२ मा ४ हजार ३ सयले लिएकोमा बढेर ०७३ मा ५ हजार ४ सय पुगेको थियो । ०७४ मा यो संख्या दोब्बरले बढेर ८ हजार ५ सय पुगेको छ ।
नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा विं.सं. २०४५ मा हेमोडायलाइसिस सेवाको पहिचान गरिएलगत्तै वीर अस्पतालमा सेवा विस्तार भएको थियो । सन् २००० सम्ममा यो सेवा २१ वटा अस्पतालमा विस्तार भएको थियो । हाल नेपालका ५३ वटा अस्पतालबाट हेमोडायलाइसिस सेवा प्राप्त गर्न सकिने वीर अस्पतालकी नेफ्रोलोजी विभाग प्रमुख रजनी हाडा बताउँछिन् ।
सेवा सुरु भएको ३ दशक पुगिसक्दा पनि नेपालमा अझै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारको सेवा दिन नसकिएको वीर अस्पतालकी नर्सिङ निर्देशक गोमादेवी निरौला बताउँछिन् । नेपालमा डाक्टर पुष्करराज सत्याल, डाक्टर धनञ्जयप्रसाद रिमाल, प्राविधिक गंगालाल श्रेष्ठले हेमोडायलाइसिस सेवाको सुरुवात गरेका थिए ।
हेमोडायलाइसिस तथा अन्य सेवाको क्षेत्रमा गरिएको व्यापक परिवर्तन र सुधारका कारण पछिल्लो समय ‘खस्किँदै वीर अस्पताल’ जस्ता समाचार शीर्षकहरू लोप भएका छन् भने ‘फैरिँदै वा बदलिँदै वीर अस्पताल’ जस्ता समाचार शीर्षकले ठाउँ पाउन थालेका छन् ।
२०७२ सालमा वीरमा जम्मा २५ जना नयाँ विरामीले डायलाइसिसको अवसर पाएकोमा ०७४ मा ३ सय ६७ नयाँ विरामीले अवसर पाए ।२४ घण्टै गरेपछि ०७३ मा ४ सय ९८ र ०७४ मा १ हजार ७ सय ६ सेसन भएका छन् । नियमित डायलाइसिस सेवा ०७२ मा ४ हजार ३ सयले लिएकोमा बढेर ०७३ मा ५ हजार ४ सय पुगेको थियो । ०७४ मा यो संख्या दोब्बरले बढेर ८ हजार ५ सय पुगेको छ ।
नेपाल सरकारले दीर्घरोगपीडितको उपचारका लागि बर्सेनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । दीर्घरोगीको उपचारार्थ विनियोजित बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा मिर्गौलारोगपीडितका लागि खर्च हुने गरेको छ । दीर्घरोगपीडितमध्ये करिब एकचौथाइ मात्र मिर्गौलारोगी छन् । यसरी हेर्दा मिर्गौलारोगीले सरकारबाट अन्य दीर्घरोगका बिरामीको तुलनामा झन्डै दोब्बर राहत पाएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले दीर्घ रोगीलाई छुट्याएको बजेटको ५३ प्रतिशत रकम मिर्गौलारोगीलाई जाने गरेको छ । मिर्गौलारोगीको संख्या भने दीर्घरोगीको २६ प्रतिशत मात्र छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालले ३०औँ राष्ट्रिय हेमोडायलाइसिस वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा नेपालमा मिर्गौलारोगीको अवस्था र त्यससम्बन्धी सरकारका विभिन्न कार्यक्रमबारे चर्चा गरिएको छ । मिर्गौैलारोगीको उपचारका लागि नेपाल सरकारले गरेका काम ज्यादै सह्रानीय भएको वीर अस्पतालका निर्देशक भूपेन्द्रकुमार बस्नेत बताउँछन् । उनका अनुसार मिर्गौलारोगपीडितका निम्ति सरकारका प्रयासहरू सन्तोषजनक रहे पनि नेपालमा अझै मापदण्डअनुसारको सेवा प्रदान गर्नमा भने कठिनाइ छ । आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्नु तथा उत्पादित जनशक्तिको पनि सही रूपमा उपयोग हुन नसक्नुले पनि नेपालमा मापदण्डअनुसारको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसकिएको निर्देशक बस्नेतको बुझाइ छ ।
मिर्गौला रोगीका लागि सरकारले जति नै पटक डायलाइसिस गराए पनि निःशुल्क सेवा दिइरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि विभिन्न शीर्षकमा गरी ५ लाख ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मिर्गौला उपचारमा नेफ्रोलोजिस्ट, सर्जन, ट्रान्सप्लान्ट सर्जन तथा अन्य सहयोगी कर्मचारीको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ ।
नेपाल सरकारले मिर्गौलापीडितलाई ५ लाख ५० हजारसम्म उपचार खर्च प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले दीर्घरोगीलाई दिने अनुदानमा १ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ खर्चिसकेको छ भने अझै पनि १ अर्ब ३५ करोडले अपुग भएको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख रोशनी लक्ष्मी तुईतुई बताउँछिन् । सरकारले दीर्घरोगपीडित बिरामीको संख्या घटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका रोकथामका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने तुईतुईको बुझाइ छ । दीर्घरोग रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी यसको उपचारमा बढ्दै गएको राज्यको व्ययभार कम गर्दै लानुपर्ने उनको धारणा छ । नेपालमा हाल ५३ वटा अस्पतालमा उपलब्ध ४ सय ६८ वटा डायलाइसिस मेसिनमार्फत ४ हजार ७ सय १० बिरामीले डायलाइसिस सेवा लिइरहेका छन् ।
मिर्गौला रोगीका लागि सरकारले जति नै पटक डायलाइसिस गराए पनि निःशुल्क सेवा दिइरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि विभिन्न शीर्षकमा गरी ५ लाख ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
मिर्गौला उपचारमा नेफ्रोलोजिस्ट, सर्जन, ट्रान्सप्लान्ट सर्जन तथा अन्य सहयोगी कर्मचारीको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । नेपालमा हाल ५० जनाको संख्यामा मिर्गौला विशेषज्ञ छन् । नेपालका विभिन्न अस्पतालमा गरी ०७४ मा ३ सय १८ बिरामीले डयलाइसिस सेवा लिएका थिए । प्रा.डा. ऋषिकुमार काफ्लेका अनुसार नेपाल सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि खाने औषधि निःशुल्क गराउनु आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपणपछाडिको औषधि निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने २३ वर्षदेखि वीर अस्पतालमा डायलाइसिस गराइरहेका बिरामी राजु तुलाधर बताउँछन् । सरकारले डायलाइसिस सेवा निःशुल्क प्रदान गरेपछि बाँच्ने अवसर पाएका मिर्गौलापीडितका लागि प्रत्यारोपणपछि र अघि खानुपर्ने औषधि समस्या बनेको उनको भनाइ छ । विगतमा आफूले घरजग्गा बेचेर मिर्गौला उपचार गराउँदै आएका तुलाधर सरकारले पछिल्लो समय मिर्गौलापीडितका लागि गरेका कामहरूलाई ज्यादै सह्रानीय मान्छन् । मिर्गौलापीडितले जीवनभर खानुपर्ने औषधिका लागि सामान्य नेपालीको पहुँच नभएकाले सरकारले डायलाइसिस सेवाजस्तै औषधि पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
टिचिङ अस्पतालले ठूलो संख्यामा माग्यो कर्मचारी
डा. भिमसिंह तिंकरी अस्पताल भर्ना, कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने
यौन सम्बन्धलाई यादगार बनाउन अपनाउनुस् यस्ता ‘टिप्स’
बालबालिकाहरूका लागि नियमित खोप लगाउन किन जरुरी छ?
दुई वर्षदेखि ‘बर्थिङ सेन्टर’ बन्द
स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गरिन् आफ्नै शिशुको घाँटी निमोठेर हत्या
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश खारेज
डा. गोविन्द केसी अमेरिका जाँदै, संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा ‘सामूहिक सत्याग्रह’